၁၂ မိနဈအတှငျး ၄ ဂိုးသှငျးပွီး အယျခမာကို ဂိုးပွတျအနိုငျယူခဲ့တဲ့ပှဲမှ ယူနိုကျတကျကစားသမားမြား၏ စှမျးဆောငျမှုနှုနျး သတျမှတျခကျြမြား
December 13, 2019 Writer News 0
ကွာသပတေးညက အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ နယျသာလနျကလပျ အယျခမာကို ၄-၀ နဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျဟာ ယူရိုပါလိဂျ ၃၂ သငျးအဆငျ့ကို အုပျစုပထမအနနေဲ့ တကျသှားခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျရော၊ အယျခမာရေ နှဈသငျးစလုံးဟာ ဒီပှဲမတိုငျမီကတညျးက ၃၂ သငျးအဆငျ့ကို တကျပွီးသား အသငျးတှပေါ။ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားကလညျး ဒီပှဲမှာ လူငယျကစားသမားတှကေို အခှငျ့အရေးပေးဖို့နဲ့ အရံကစားသမားအခြိုးကို ပှဲကစားမှုအတှအေ့ကွုံပေးဖို့အတှကျ အလုံးစုံနီးပါး အရံအသငျးကို ပှဲထုတျအသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျဟာ ပထမပိုငျးမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ၁၂ မိနဈအတှငျး ၄ ဂိုးသှငျးပွီး အနိုငျရခဲ့တာပါ။ လူငယျတိုကျစဈမှူးလေး ဂရငျးဝုဒျက ၂ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး အကျရျှလယေနျးနဲ့ မာတာတို့က ၁ ဂိုးစီသှငျးခဲ့တာပါ။ ယူနိုကျတကျဟာ စပါးနဲ့ မနျစီးတီးလို ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ထိပျသီးအသငျးတှကေို အနိုငျရခဲ့သလို အခုလညျး အယျခမာကို အနိုငျရခဲ့လို့ ၈ ရကျအတှငျး ၃ ပှဲ အနိုငျကစားခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ အဲဗာတနျနဲ့ ကစားရမယျ့ပှဲအတှကျလညျး ယုံကွညျမှု ပိုမိုမွငျ့တကျစခေဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျကို လာကစားရမယျ့ အဲဗာတနျဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ နညျးပွလကျမဲ့ဖွဈနပွေီး သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောငျး ဒနျကနျ ဖာဂူဆနျက ယာယီနညျးပွအဖွဈ ဦးဆောငျလာမှာပါ။ အဲဗာတနျနဲ့ပှဲမှာ ယူနိုကျတကျ ဘယျလိုကစားမှာလဲ? ဘယျကစားပှဲက ကစားသမားတှရေော အခှငျ့အရေးရနိုငျမှာလဲဆိုတာနဲ့ ဘယျကစားပှဲက ယူနိုကျတကျကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျနိုငျမှုတှကေို ဗွိတိနျအားကစားဝကျဘျဆိုဒျတှကေ သတျမှတျထားမှုကို ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ဆာဂြီယို ရိုမဲရိုး (၇)
အာဂငျြတီးနားသား ဂိုးသမား ဆာဂြီယို ရိုမဲရိုးဟာ လကျရှေးစငျအသငျးမှာ ဦးစားပေး ဂိုးသမားဖွဈနပေမေယျ့ ယူနိုကျတကျမှာတော့ ဒီဂေးရဲ့ အရံပဲဖွဈနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျမှာလညျး ဖလားပွိုငျပှဲတှပေဲ တောကျလြှောကျကစားခှငျ့ရနတောပါ။ သူ့ရဲ့အသငျးဟောငျး အယျခမာပှဲမှာတော့ ဒီရာသီ ယူရိုပါလိဂျ ၄ ပှဲမွောကျ ဝငျကစားခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီပှဲမှာတော့ ရိုမဲရိုးဟာ ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျမှုတှမေလုပျခဲ့ရပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာပါ။ ၃၂ နှဈရှိ ရိုမဲရိုးဟာ မိနဈ ၉၀ တဈပှဲလုံးမှာ ဂိုးကာကှယျမှု ၃ ကွိမျပဲ လုပျခဲ့ရတယျ။ သူ့ရဲ့စှမျးဆောငျနိုငျမှုကိုတော့ ၁၀ မှာ ၇ သတျမှတျကွပါတယျ။
ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားဟာ ယူရိုပါလိဂျမှာ လူငယျတှကေို ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ အသုံးပွုသလို ဒီပှဲမှာလညျး အသကျ ၁၉ နှဈသာရှိသေးတဲ့ ဘယျအစှနျခံစဈမှူးလေး ဘရနျဒနျဝီလြံကို အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။ ဝီလြံဟာ ယူနိုကျတကျအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ ၁၀ ပှဲကစားခှငျ့ရခဲ့တာဖွဈပွီး အယျခမာရဲ့ ညာအစှနျတိုကျစဈမှူး ယူကီနာရီ ဘာဂါဝါရာကို မလှုပျနိုငျအောငျ ထိနျးနိုငျခဲ့တယျ။ ဘောလုံးကို ကွားဖွတျလုယူမှု ၂ ကွိမျနဲ့ ရှငျးထုတျမှု ၁ ကွိမျပွုလုပျနိုငျခဲ့သလို လိမျခေါကျမှု ၁ ကွိမျလုပျနိုငျခဲ့တယျ။ ဘောလုံးပေးပို့မှု ၉၅% တိကခြဲ့တာမို့ အထငျကွီးစရာ ခွစှေမျးကိုပွသနိုငျခဲ့ပွီး ၁၀ မှာ ၇ အထိ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အယျခမာကို ယူနိုကျတကျက တဈဖှဲ့လုံးထိနျးခြုပျကစားနိုငျခဲ့တာဟာ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးခံစဈမှူး ဖွဈတဲ့ ဟယျရီမကျဂှိုငျးယားက ယူနိုကျတကျနောကျတနျးမှာ တညျတညျ ငွိမျငွိမျကစားသှားခဲ့လို့လညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီဇငျဘာပှဲကပျြတှရှေိနလေို့ ၆၇ မိနဈမှာ လူစားလဲခဲ့ပွီး မကျဂှိုငျးယားရဲ့ စှမျးဆောငျနိုငျမှုက ၆ ရှိပါတယျ။
မကျဂှိုငျးယားလိုပဲ တှမျဇီဘီလညျး ယူနိုကျတကျခံစဈအတှကျ ထူးထူးခွားခွား ကွီးကွီးကယျြကယျြ လုပျစရာမလိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အယျခမာက တိုကျစဈဆငျလာတိုငျးမှာတော့ တှမျဇီဘီက အရေးပါခဲ့ပါတယျ။ ၂၂ နှဈရှိ တှမျဇီဘီဟာ ဘောလုံးရှငျးထုတျမှု ၃ ကွိမျ၊ ကွားဖွတျယူမှု ၁ ကွိမျ၊ ဘောလုံးပေးပို့မှု ၉၀.၆% တိကခြဲ့ပွီး စှမျးဆောငျနိုငျမှုအဆငျ့ (၇)ရှိခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၃၄ နှဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့ အကျရျှလယေနျးဟာ ထိပျတနျးကစားသမားအဆငျ့ ခွစှေမျးမြိုးနဲ့ မကစားနိုငျတော့ဘူးလို့ အားလုံးလိုလိုက ယုံကွညျနကွေသလို ယူနိုကျတကျကစားသမားတှေ ကိုယျတိုငျက သိပျမကွိုကျတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီရာသီအပွီးထိ ယူနိုကျတကျနဲ့စာခြုပျ ရှိနသေေးတဲ့ အကျရျှလယေနျးဟာ ယူနိုကျတကျကို အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ တာဝနျယူကစားသှားခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျရဲ့နိုငျပှဲမှာ အဓိကကခြဲ့ပါတယျ။ ပှဲခြိနျ ၅၄ မိနဈမှာ မာတဈဖနျတီးပေးတာကတဈဆငျ့ ဂိုးအပျေါထောငျ့ထဲကို ကနျသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ အကျရျှလယေနျးဟာ ဒီပှဲမှာ စှမျးဆောငျနိုငျမှု အဆငျ့ ၈ အထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဆားဗီးယားကှငျးလယျလူ နီမနျဂြာမာတဈဟာ တဈခြိနျကတော့ သူကစားတဲ့ကှငျးလယျအတှငျးပိုငျး နရောမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျခံခဲ့ရသူပါ။ လကျရှိ အခြိနျမှာတော့ အကျရျှလယေနျးလိုပဲ အသကျ ၃၁ နှဈရှိ မာတဈဟာ ယူနိုကျတကျမှာကစားဖို့ မထိုကျတနျတော့ဘူးလို့ ယူဆကွသူတှမြေားနပေါတယျ။ အယျခမာပှဲဟာ မာတဈအတှကျ ဒီရာသီ ယူနိုကျတကျ ၆ ပှဲမွောကျကစားခှငျ့ရတာပါ။ မာတဈဟာ ပှဲအထနှေးခဲ့ပမေယျ့ အပွေးလညျး ပိုကောငျးလာလို့ မိနဈ ၉၀ ပွညျ့ကစားခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု တိကမြှုရာခိုငျနှုနျးက ၉၂% အထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ စှမျးဆောငျနိုငျမှုကတော့ အဆငျ့ ၇.၅ သတျမှတျခံခဲ့ရပါတယျ။
ဂြိမျးဈဂါနာက ၁၈ နှဈသာရှိသေးပွီး ဒီရာသီယူနိုကျတကျအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ ၅ ပှဲမွောကျနဲ့ ယူရိုပါလိဂျမှာ ၄ ပှဲမွောကျကစားခှငျ့ရတာပါ။ ဒီကှငျးလယျခံစဈကစားသမားလေးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ ပုံမှနျတဈနရော မရသေးပါဘူး။ အယျခမာပှဲက ခွစှေမျးအရတော့ ယူနိုကျတကျလူငယျစီမံကိနျးကနေ ထှကျလာတဲ့ လူငယျကှငျးလယျကစားသမားတဈယောကျဖွဈနပွေီး အနာဂတျမှာမြှျောလငျ့ရတဲ့ ကစားသမားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။ အယျခမာပှဲမှာ ဂြိမျးဈဂါနာရဲ့ စှမျးဆောငျမှုက အဆငျ့ ၆ ရှိပါတယျ။
စပိနျကှငျးလယျကစားသမား ဂြူအနျမာတာဟာ သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးနှဈတှဆေီက ခွစှေမျးကို ပွနျမရတော့ပမေယျ့ အယျခမာပှဲက ခွစှေမျးကတော့ အတျောကောငျးခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျနဲ့ တိုကျစဈပိုငျးကို ခြိတျဆကျပေးတဲ့နရောကနေ ကစားသှားခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျရခဲ့တဲ့ ပငျနယျတီကို ၆၂ မိနဈမှာ သှငျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ၂ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဂရငျးဝုဒျရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေိုလညျး မာတာက ဖနျတီးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မာတာရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုကလညျး ၉၂.၇% အထိ ရှိလာခဲ့ပွီး အယျခမာပှဲက မာတာရဲ့စှမျးဆောငျမှုက အဆငျ့ ၈ အထိ ရှိနပေါတယျ။
အယျခမာပှဲမှာ ၂ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ မဆေငျဂရငျးဝုဒျဟာ ၁၈ နှဈသာရှိပါသေးတယျ။ ဒီပှဲမှာ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဖွဈပွီး စှမျးဆောငျနိုငျမှုအဆငျ့ ၉.၅ အထိ ရခဲ့ပါတယျ။ ရာသီမစမီကတညျးက မဆေငျ ဂရငျးဝုဒျဟာ သူတှမွေ့ငျခဲ့ဖူးတဲ့သူတှအေနကျက အကောငျးဆုံး တိုကျစဈအဆုံးသတျ ဂိုးသှငျးသူလို့ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားက ခြီးကြူးခဲ့ပါတယျ။ အယျခမာပှဲမှာ ဂရငျးဝုဒျလုပျပွသှားတဲ့ စှမျးဆောငျမှုတှကေို မွငျတှရေ့ပွီးနောကျမှာ ဂရငျးဝုဒျကို ဘာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး လူငယျကစားသမားတှထေဲက တဈဦးအဖွဈ သတျမှတျကွတယျဆိုတာကလညျး ထငျရှားသှားပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာ ခွစှေမျးမပွနိုငျသလို ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ဂရငျးဝုဒျက ကိုယျတိုငျ ၂ ဂိုးသှငျးခဲ့သလို မာတာသှငျးခဲ့တဲ့ ပငျနယျတီကလညျး ဂရငျးဝုဒျကွောငျ့ပဲ ရခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ပထမသှငျးဂိုးဆိုရငျ ဧရိယာအစပျကနေ သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပွီး ကြှမျးကငျြမှုကို ပွသသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီးကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ၁ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ခွငျးနဲ့အတူ အယျခမာပှဲမှာ မာရှယျဟာ ဗဟိုတိုကျစဈမှူး နရောကနေ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အယျခမာပှဲမှာတော့ သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးကိုမပွနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ပှဲခြိနျ ၅၈ မိနဈမှာ ဂရငျးဝုဒျဖနျတီးပေးတဲ့ အပိုငျအခှငျ့အရေးကို ဂိုးပျေါကြျောကနျခဲ့ပွီးနောကျ လူစားလဲခွငျးခံခဲ့ရကာ မာရှယျရဲ့ အယျခမာပှဲ စှမျးဆောငျနိုငျမှုက အဆငျ့ ၆ ပဲရှိခဲ့ပါတယျ။
အနျဒရီးယပျဈ ပါရဲရား (၇.၅)
ဘရာဇီးကစားသမားလေး အနျဒရီးယပျဈ ပါရဲရားကတော့ အယျခမာပှဲမှာ ဘယျတောငျပံတိုကျစဈ ကနေ ကစားခဲ့ရတယျ။ ပါရဲရားရဲ့ ယူနိုကျတကျကစားသမားဘဝကတော့ ခွစှေမျးအတကျအကြ မမှနျကနျမှုတှနေဲ့ ရောထှေးနတေယျ။ တဈခါတဈခါ အံ့သွလောကျအောငျကောငျးပမေယျ့ တဈခါတဈခါမှာ စိတျပကျြစရာကောငျးအောငျ ခွစှေမျးညံ့တာတှနေဲ့ ရောထှေးနတေယျ။ အယျခမာပှဲအစောပိုငျးမှာ ပါရဲရားရဲ့ကနျခကျြကို အယျခမာ ဂိုးသမားက အလှယျတကူကာကှယျသှားခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျအဖှငျ့ဂိုးရခဲ့တာက ပါရဲရား အဓိကကခြဲ့တယျ။ ပါရဲရားက အယျခမာခံစဈကိုလိမျခေါကျပွီး နရောလှတျကိုခပြေးလိုကျတဲ့ ဘောလုံးကို မာတာနဲ့ မာတဈတို့က အပေးအယူလုပျပွီး အကျရျှလယေနျး ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားပေးခဲ့ကွတာပါ။ ၂၃ နှဈရှိ ပါရဲရားဟာ အယျခမာပှဲမှာ ကနျခကျြ ၅ ကွိမျပွုလုပျပွီး ၂ ကွိမျဂိုးပေါကျတညျ့ခဲ့သလို အရေးပါတဲ့ ပေးပို့မှု ၁ ကွိမျလုပျနိုငျခဲ့လို့ သူ့ရဲ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြက ၇.၅ အထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။
လူစားဝငျကစားသမားတှထေဲကတော့ တာဟဈခြောငျက ၆.၅၊ ဖီးလျဂြုံးဈက ၆၊ အီသနျလာ့ဒျက ၆ ရှိခဲ့ပါတယျ။
၁၂ မိနစ်အတွင်း ၄ ဂိုးသွင်းပြီး အယ်ခမာကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲမှ ယူနိုက်တက်ကစားသမားများ၏ စွမ်းဆောင်မှုနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ
ကြာသပတေးညက အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ နယ်သာလန်ကလပ် အယ်ခမာကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ယူရိုပါလိဂ် ၃၂ သင်းအဆင့်ကို အုပ်စုပထမအနေနဲ့ တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရော၊ အယ်ခမာရေ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ဒီပွဲမတိုင်မီကတည်းက ၃၂ သင်းအဆင့်ကို တက်ပြီးသား အသင်းတွေပါ။ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားကလည်း ဒီပွဲမှာ လူငယ်ကစားသမားတွေကို အခွင့်အရေးပေးဖို့နဲ့ အရံကစားသမားအချိုးကို ပွဲကစားမှုအတွေ့အကြုံပေးဖို့အတွက် အလုံးစုံနီးပါး အရံအသင်းကို ပွဲထုတ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ ပထမပိုင်းမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ၁၂ မိနစ်အတွင်း ၄ ဂိုးသွင်းပြီး အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ လူငယ်တိုက်စစ်မှူးလေး ဂရင်းဝုဒ်က ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အက်ရ်ှလေယန်းနဲ့ မာတာတို့က ၁ ဂိုးစီသွင်းခဲ့တာပါ။ ယူနိုက်တက်ဟာ စပါးနဲ့ မန်စီးတီးလို ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ထိပ်သီးအသင်းတွေကို အနိုင်ရခဲ့သလို အခုလည်း အယ်ခမာကို အနိုင်ရခဲ့လို့ ၈ ရက်အတွင်း ၃ ပွဲ အနိုင်ကစားခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အဲဗာတန်နဲ့ ကစားရမယ့်ပွဲအတွက်လည်း ယုံကြည်မှု ပိုမိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကို လာကစားရမယ့် အဲဗာတန်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ နည်းပြလက်မဲ့ဖြစ်နေပြီး သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်း ဒန်ကန် ဖာဂူဆန်က ယာယီနည်းပြအဖြစ် ဦးဆောင်လာမှာပါ။ အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် ဘယ်လိုကစားမှာလဲ? ဘယ်ကစားပွဲက ကစားသမားတွေရော အခွင့်အရေးရနိုင်မှာလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်ကစားပွဲက ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ဗြိတိန်အားကစားဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေက သတ်မှတ်ထားမှုကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဆာဂျီယို ရိုမဲရိုး (၇)
အာဂျင်တီးနားသား ဂိုးသမား ဆာဂျီယို ရိုမဲရိုးဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ဦးစားပေး ဂိုးသမားဖြစ်နေပေမယ့် ယူနိုက်တက်မှာတော့ ဒီဂေးရဲ့ အရံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာလည်း ဖလားပြိုင်ပွဲတွေပဲ တောက်လျှောက်ကစားခွင့်ရနေတာပါ။ သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း အယ်ခမာပွဲမှာတော့ ဒီရာသီ ယူရိုပါလိဂ် ၄ ပွဲမြောက် ၀င်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲမှာတော့ ရိုမဲရိုးဟာ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒုတိယပိုင်းမှာပါ။ ၃၂ နှစ်ရှိ ရိုမဲရိုးဟာ မိနစ် ၉၀ တစ်ပွဲလုံးမှာ ဂိုးကာကွယ်မှု ၃ ကြိမ်ပဲ လုပ်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတော့ ၁၀ မှာ ၇ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ ယူရိုပါလိဂ်မှာ လူငယ်တွေကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အသုံးပြုသလို ဒီပွဲမှာလည်း အသက် ၁၉ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ဘယ်အစွန်ခံစစ်မှူးလေး ဘရန်ဒန်ဝီလျံကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ၀ီလျံဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၀ ပွဲကစားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး အယ်ခမာရဲ့ ညာအစွန်တိုက်စစ်မှူး ယူကီနာရီ ဘာဂါဝါရာကို မလှုပ်နိုင်အောင် ထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘောလုံးကို ကြားဖြတ်လုယူမှု ၂ ကြိမ်နဲ့ ရှင်းထုတ်မှု ၁ ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလို လိမ်ခေါက်မှု ၁ ကြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘောလုံးပေးပို့မှု ၉၅% တိကျခဲ့တာမို့ အထင်ကြီးစရာ ခြေစွမ်းကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀ မှာ ၇ အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အယ်ခမာကို ယူနိုက်တက်က တစ်ဖွဲ့လုံးထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တာဟာ ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးခံစစ်မှူး ဖြစ်တဲ့ ဟယ်ရီမက်ဂွိုင်းယားက ယူနိုက်တက်နောက်တန်းမှာ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ကစားသွားခဲ့လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာပွဲကျပ်တွေရှိနေလို့ ၆၇ မိနစ်မှာ လူစားလဲခဲ့ပြီး မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုက ၆ ရှိပါတယ်။
မက်ဂွိုင်းယားလိုပဲ တွမ်ဇီဘီလည်း ယူနိုက်တက်ခံစစ်အတွက် ထူးထူးခြားခြား ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်စရာမလိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အယ်ခမာက တိုက်စစ်ဆင်လာတိုင်းမှာတော့ တွမ်ဇီဘီက အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ ၂၂ နှစ်ရှိ တွမ်ဇီဘီဟာ ဘောလုံးရှင်းထုတ်မှု ၃ ကြိမ်၊ ကြားဖြတ်ယူမှု ၁ ကြိမ်၊ ဘောလုံးပေးပို့မှု ၉၀.၆% တိကျခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့် (၇)ရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၄ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းဟာ ထိပ်တန်းကစားသမားအဆင့် ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ မကစားနိုင်တော့ဘူးလို့ အားလုံးလိုလိုက ယုံကြည်နေကြသလို ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေ ကိုယ်တိုင်က သိပ်မကြိုက်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီအပြီးထိ ယူနိုက်တက်နဲ့စာချုပ် ရှိနေသေးတဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းဟာ ယူနိုက်တက်ကို အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူကစားသွားခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့နိုင်ပွဲမှာ အဓိကကျခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် ၅၄ မိနစ်မှာ မာတစ်ဖန်တီးပေးတာကတစ်ဆင့် ဂိုးအပေါ်ထောင့်ထဲကို ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အက်ရ်ှလေယန်းဟာ ဒီပွဲမှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အဆင့် ၈ အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆားဗီးယားကွင်းလယ်လူ နီမန်ဂျာမာတစ်ဟာ တစ်ချိန်ကတော့ သူကစားတဲ့ကွင်းလယ်အတွင်းပိုင်း နေရာမှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူပါ။ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ အက်ရ်ှလေယန်းလိုပဲ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ မာတစ်ဟာ ယူနိုက်တက်မှာကစားဖို့ မထိုက်တန်တော့ဘူးလို့ ယူဆကြသူတွေများနေပါတယ်။ အယ်ခမာပွဲဟာ မာတစ်အတွက် ဒီရာသီ ယူနိုက်တက် ၆ ပွဲမြောက်ကစားခွင့်ရတာပါ။ မာတစ်ဟာ ပွဲအထနှေးခဲ့ပေမယ့် အပြေးလည်း ပိုကောင်းလာလို့ မိနစ် ၉၀ ပြည့်ကစားခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု တိကျမှုရာခိုင်နှုန်းက ၉၂% အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့ အဆင့် ၇.၅ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဂျိမ်းစ်ဂါနာက ၁၈ နှစ်သာရှိသေးပြီး ဒီရာသီယူနိုက်တက်အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၅ ပွဲမြောက်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်မှာ ၄ ပွဲမြောက်ကစားခွင့်ရတာပါ။ ဒီကွင်းလယ်ခံစစ်ကစားသမားလေးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ ပုံမှန်တစ်နေရာ မရသေးပါဘူး။ အယ်ခမာပွဲက ခြေစွမ်းအရတော့ ယူနိုက်တက်လူငယ်စီမံကိန်းကနေ ထွက်လာတဲ့ လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး အနာဂတ်မှာမျှော်လင့်ရတဲ့ ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ အယ်ခမာပွဲမှာ ဂျိမ်းစ်ဂါနာရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုက အဆင့် ၆ ရှိပါတယ်။
စပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဂျူအန်မာတာဟာ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်တွေဆီက ခြေစွမ်းကို ပြန်မရတော့ပေမယ့် အယ်ခမာပွဲက ခြေစွမ်းကတော့ အတော်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာကနေ ကစားသွားခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ရခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီကို ၆၂ မိနစ်မှာ သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဂရင်းဝုဒ်ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကိုလည်း မာတာက ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မာတာရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုကလည်း ၉၂.၇% အထိ ရှိလာခဲ့ပြီး အယ်ခမာပွဲက မာတာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုက အဆင့် ၈ အထိ ရှိနေပါတယ်။
အယ်ခမာပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ မေဆင်ဂရင်းဝုဒ်ဟာ ၁၈ နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ ဒီပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့် ၉.၅ အထိ ရခဲ့ပါတယ်။ ရာသီမစမီကတည်းက မေဆင် ဂရင်းဝုဒ်ဟာ သူတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေအနက်က အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အဆုံးသတ် ဂိုးသွင်းသူလို့ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ အယ်ခမာပွဲမှာ ဂရင်းဝုဒ်လုပ်ပြသွားတဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရပြီးနောက်မှာ ဂရင်းဝုဒ်ကို ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လူငယ်ကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုတာကလည်း ထင်ရှားသွားပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်သလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ဂရင်းဝုဒ်က ကိုယ်တိုင် ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့သလို မာတာသွင်းခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီကလည်း ဂရင်းဝုဒ်ကြောင့်ပဲ ရခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ပထမသွင်းဂိုးဆိုရင် ဧရိယာအစပ်ကနေ သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြသသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ၁ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ အယ်ခမာပွဲမှာ မာရှယ်ဟာ ဗဟိုတိုက်စစ်မှူး နေရာကနေ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အယ်ခမာပွဲမှာတော့ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကိုမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပွဲချိန် ၅၈ မိနစ်မှာ ဂရင်းဝုဒ်ဖန်တီးပေးတဲ့ အပိုင်အခွင့်အရေးကို ဂိုးပေါ်ကျော်ကန်ခဲ့ပြီးနောက် လူစားလဲခြင်းခံခဲ့ရကာ မာရှယ်ရဲ့ အယ်ခမာပွဲ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုက အဆင့် ၆ ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။
အန်ဒရီးယပ်စ် ပါရဲရား (၇.၅)
ဘရာဇီးကစားသမားလေး အန်ဒရီးယပ်စ် ပါရဲရားကတော့ အယ်ခမာပွဲမှာ ဘယ်တောင်ပံတိုက်စစ် ကနေ ကစားခဲ့ရတယ်။ ပါရဲရားရဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘ၀ကတော့ ခြေစွမ်းအတက်အကျ မမှန်ကန်မှုတွေနဲ့ ရောထွေးနေတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အံ့သြလောက်အောင်ကောင်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါမှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းအောင် ခြေစွမ်းညံ့တာတွေနဲ့ ရောထွေးနေတယ်။ အယ်ခမာပွဲအစောပိုင်းမှာ ပါရဲရားရဲ့ကန်ချက်ကို အယ်ခမာ ဂိုးသမားက အလွယ်တကူကာကွယ်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်အဖွင့်ဂိုးရခဲ့တာက ပါရဲရား အဓိကကျခဲ့တယ်။ ပါရဲရားက အယ်ခမာခံစစ်ကိုလိမ်ခေါက်ပြီး နေရာလွတ်ကိုချပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို မာတာနဲ့ မာတစ်တို့က အပေးအယူလုပ်ပြီး အက်ရ်ှလေယန်း ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးခဲ့ကြတာပါ။ ၂၃ နှစ်ရှိ ပါရဲရားဟာ အယ်ခမာပွဲမှာ ကန်ချက် ၅ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး ၂ ကြိမ်ဂိုးပေါက်တည့်ခဲ့သလို အရေးပါတဲ့ ပေးပို့မှု ၁ ကြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ သူ့ရဲ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်က ၇.၅ အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
လူစားဝင်ကစားသမားတွေထဲကတော့ တာဟစ်ချောင်က ၆.၅၊ ဖီးလ်ဂျုံးစ်က ၆၊ အီသန်လာ့ဒ်က ၆ ရှိခဲ့ပါတယ်။
တိုမိုရီတဈယောကျ ခယျြလျဆီးနဲ့ 5နှဈစာခြုပျထပျခြုပျပွီး ဘာတှရေညျမှနျးထားလဲ?
ဆိုးလျရှားခြီးကြူးထိုကျတဲ့ မနျခကျြစတာကိုသှေးသဈလောငျးမယျ့ကစားသမား (သို့) ဝိနျးရှနျနီထကျတျောတယျဆိုတဲ့ မနျခကျြစတာကစားသမားလေး